Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || अधुरो इच्छा (कथा) – kayakairan.com
अधुरो इच्छा (कथा)
उमेरले ६५ वर्ष भएपनि हरि नारायण हट्टाकट्टा नै देखिन्छन् । ढिला विवाह गरे अनि ढिला नै छोरी जन्माए । घरमा अहिले तीनजना मात्रै छन् । उनको २५ वर्षे छोरी आशा लगभग पढाइ सकाउने क्रममा छिन् । पढाइ सकिएपछि उनी जागिर गर्न चाहन्छिन् । छोरा नभएको घरमा उनी छोरा बनि आफ्नो आमाबुबाको सेवा गर्न चाहन्छिन् ।
रेडियो बजिरहेको हुन्छ । समाचार सुन्दै गरेका बुढा एकाएक कराउँछन्, “ए बुढी सुनिस् । जनकपुरमा दाइजो नदिएको कारणले गर्दा एउटा जिउँदै नारीमाथि आगो लगाइदिएछन् । हेर त मान्छे सम्पतिको लागि कति हदसम्म गिर्न सक्छन् । विचरी एक अवोध नारीले यसै आफ्नो ज्यानको आहुति दिनुप¥यो । खै देशले मुहार फे¥यो भन्छन् । तर, देशको हालत त्यस्तै छ ।”
बुढाले खुइइअ गरी लामो श्वास फेरे ।
“के चिन्ता गर्छौ बुढा । यो त एउटा नमूना मात्र हो । हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी, भ्रष्टाचार यी सब अब त खुलेआम भइसके । न कसैले यसलाई रोक्न सक्छन् । न त कसैको आवाज उठाउने प्रयास नै गर्छन् । छोडिदेऊ यस्ता कुरा । हामी पनि त सिर्फ यी घटनामा दर्शक मात्र नै त हौ नि । केही गर्न सक्ने हैन क्यारे ।” बुढी घरको सुसेधन्दा गर्न थालिन् ।
“हाम्रो पनि छोरी छे जसको उमेर विहे गर्नेबेला भइसक्यो । अब उसको विहे पनि गर्दिनुपर्छ । चिन्ता नलिएर हुन्छ र भन्या ?”, बुढा चिन्तित भए । बुढी बोलिन्, “हो त नि तिम्ले चिन्ता गरेर सब ठीक भै हाल्छ क्यारे ।”
अर्को कोठाबाट आशाको आवाज आयो, “मलाई घरबाट लखेट्ने कुरा हुँदैछ कि क्या हो । हेर्नु है मैले भन्देको छु । मलाई गर्नुछैन बे–से । म पहिला आफ्नो खुट्टामा उभिन चाहन्छु । अब पनि मेरा बारेमा यस्ता फजुल कुरा गर्नुभयो भने कि अंश काढेर छुट्टिन्छु, कि त तपाईंलाई वृद्घाश्रम लगेर छोड्दिन्छु ।”
छोरीको कुरा सुनेर बुढी मज्जाले हाँसिन् । बुढा मुरमुरिन लागे, “हेर न आमा गोता गएकी । आमा मुखाले, छोरी त झन् मुखाले । यसको यस्तो संस्कारले त मलाई वृद्धाश्रम होइन मेरो इज्जतलाई मसानघाट चै पक्कै पु¥याउँछ ।”
बुढा चुप हुन्छन् र छोरीकै भविष्यको कल्पनामा डुब्न थाल्छन् ।
मान्छेको इच्छाशक्तिलाई पनि कहाँ रोक्न सकिन्छ र ? बढ्दो बुढ्यौलीको साथसाथै हरि नारायणलाई आफ्नी छोरीलाई बेहुलीको पहिरनमा हेर्ने इच्छा बढ्दै जान्छ । उसले यो कुरा छोरीलाई सयौचोटि भन्छ । तर, खै उनकी छोरीले यो कुरालाई बुझ्दै बुझ्दिनन् ।
आशालाई बाबुको इच्छाभन्दा पनि आफ्नो भविष्य महत्वपूर्ण लाग्छ । हुन पनि त हो, करकापमा बिहे गर्दा छोरीको केही गर्ने सपना पूरा नहुने कुरा चै खै त बुबाले बुझेका ?
दिमागमा हरेक कुरा खेलाउँदा खेलाउँदै एकदिन उनी बिरामी पर्छन् । उनलाई हस्पिटल लगिन्छ । तर, अहँ उनको रोगको पहिचान गर्न सकिदैन । उनी दिनानुदिन कमजोर बन्दै जान्छन् । उनको त्यो हट्टाकट्टा ज्यान सुकेर लौरी झै हुन्छ । भएको आधा जायजेथा पनि सकिन्छ । तर, न उनलाई लागेको रोग थाहा पाउन सकिन्छ न त उनलाई बिसेक नै हुन्छ ।
परिवारमा निराश छाइसकेको छ । कसै गर्दा पनि केही सीप नलागेपछि कसको के लाग्छ र ? मानिस जीवन नै हो सबै सोचेको झैँ कहाँ हुन्छ र ?
अन्ततः हरि नारायणले सदाका लागि आँखा चिम्लिन्छन् । आफ्नो खुट्टामा उभिई बुबाको सेवा गर्ने छोरीको सपना अधुरो हुन्छ भने उता बेहुलीको पहिरनमा सजिएको छोरीलाई देख्ने एक बाबुको इच्छा पनि अधुरो नै हुन्छ ।